You are here: Home somal Xulka Kubadda Cagta Gobollka Xaysimo Oo 2-0 Ku Garaacay Badhan
Gobollka Xaysimo oo ah gobol ku cusub tartanka ciyaaraha gobollada Somaliland ayaa wacdarro soo ban-dhigay waxayna kulankan ciyaarayeen iyaga oo maanka ku hayay in si gooniya isha loogu wada hayay qaab ciyaareedkooda ay la soo shir-tegi doonaan.
Labada gobol ayaa qaab ciyaareed qurux baddan ku bilawday ciyaarta, waxaana weeraro aan badnayn oo ay iskugu jawaabeen ka faa’ideysatay badhtamihii qeybtii hore ee ciyaarta gobollka Xaysimo oo hogaanka ciyaarta la wareegay ka dib markii ay la yimaadeen goolkii ugu horeeyay ee ciyaarta, waxaana lagu kala nastay qeybtii hore 1-0 gobollka Xaysimo ciyaarta ku hogaaminayo.
Markii layskugu soo laabtay qeybtii dambe ee ciyaarta ayaa gobollka Badhan bilaabay dedaalo baddan oo ay ku doonayaan inay la yimaadaan goolka hogaanka ciyaarta lagaga hayo, laakiin mar qudha waxay ciyaartii is bedashay markii gool ku qurux baddan ay hogaanka ku sii dheeraysteen gobollka Xaysimo kaas oo ahaa koodii 2-aad, waxaana u dhalliyey laacibka numberka 9-aad u sita.
Gobollka Xaysimo ayaa qeybta dambe ee ciyaarta muujiyay qaab ciyaareed fiican, halka Badhan ay dedaal ugu jirtay inay la timaado goolasha lagu leeyahay, inkasta oo aanay u suurto-gelin waxayna ugu dambayn ciyaartu ku dhammaatay 2:0 ay Xaysimo guul muhiim ah kaga gaadhay Badhan.
Xaysimo ayaaa guushani ay ka caawisay inay hogaamiyaan Group-ka koowaad waxaana ay leeyihiin 3-dhibcood iyo 2-gool oo nadiib ah, halka gobollka Daad-Madheedh isna uu ku soo xigo leeyahayna 3-dhibcood iyo 1-gool oo nadiif ah.
Dhanka kale waxaa maalinta Berrito kulan xiisihiisa iyo xamaasadiisaba watta iska hor-iman doona gobollada Sanaag iyo Saraar oo ku wada jira Group 2